Iindaba -Izicelo eziBanzi zeNdawo yeCapsule Slip Rings
Yintoni iringi yesiliphu? Iringi yesiliphu sisixhobo se-elektroniki esivumela ukujikeleza okungasikelwanga mda kuma-360 ngelixa uhambisa amandla, uphawu, idatha okanye imithombo yeendaba ukusuka kwiqonga elimileyo ukuya kwiqonga elijikelezayo, yinto edibeneyo yokujikeleza ngokudibeneyo okanye umbane wombane kwiinkqubo ezininzi zolawulo lokuhamba. Amakhonkco esityibilikisi esixineneyo ahlala ene-flange yokunyusa, ke nawo anokubizwa ngokuba yimisesane yesiliphu esincinci. Icompact yohlobo lwesiliphu esityibilikayo njengeyona mfuno inkulu yamakhonkco esiliphu kwiimarike, iphakheji yazo encinci yomzimba, uphawu olunamandla kunye nokudluliselwa kwedatha kunye nexabiso elinendleko kakhulu linokunyusa izixhobo zabathengi kunye neendleko zemveliso.
Iinkqubo zekhamera yokhuseleko zii-capsule slip rings 'ezona zixhaphakileyo kunye nevolumu enkulu yesicelo semfuno. Iicingo ze-AOOD ezi-6, iingcingo ezili-12 okanye iingcingo ezingama-24 ezisemgangathweni zeebrashi zekhomplothi ezityibilikayo ezisetyenziswa kakhulu kwiikhamera zeedome zeCCTV, iikhamera zokhuseleko ze-HD-SDI, iikhamera ze-IP, iikhamera ze-PTZ kunye neepaneli kunye neekhamera zokuthambeka, ubomi babo ukuya kwizigidi ezili-10 zohlaziyo kunye ingadlulisa kakuhle i-USB, iGigabit Ethernet, i-BUS, inzwa kunye nolawulo lweempawu. Ezi khonkco zincinci zincinci zinokudityaniswa kunye ne-coax rotary ngokudibeneyo okanye i-FORJ ukubonelela ngevidiyo epheleleyo ye-HD okanye ujongano lwedatha enkulu, ukulungela izicelo eziphezulu ezinje ngeekhamera zokuhlola iipayipi ezingama-360, ii-ROVs ezincinci, iirobhothi zokucoca ekhaya kunye nezixhobo ezincinci ezichanekileyo . Iphakheji encinci kunye ukuya kuthi ga kwiisekethe ezingama-60, uphawu olugqwesileyo kunye nokukwazi ukuhambisa idatha kubenza ukuba babe zezona zisombululo zilungileyo zokutshixa kwiinkqubo ezininzi zolawulo lwesithuba esinyiniweyo.